Izixhobo zeSensible zihlengahlengisa ubuGcisa beNdawo yangasese | WOWOW IiFaucets-WOWOW IiFaucets
Ikhaya / Blog / Izixhobo ezinengqiqo zilungisa ubuchule bendlu yangasese
Izixhobo ezinengqiqo zilungisa ubuchule bendlu yangasese
2020 / 09 / 16 uhleloBlog 7384 0
NguLindsey M. Roberts, Washington Ngenisa
Enye yeendawo zokugqibela onokujonga kuzo xa uthetha no-Alexa yindlu yangasese. Kwaye elona gumbi linobuqu liguquka libe bubulumko, nazo zonke izinto ezivela kwizipili ezisebenza ngelizwi ukuya kwiintloko zokuhlamba ze-aromatherapy. Igumbi lokuphumla elithandwayo eJapan, iToto Neorest, ine "isihlalo eshushu, ulawulo oluzenzekelayo, ibhidet kunye neenzwa zokukhumbula ukubonelela ngobuchule obenziwe ngokwentando," utshilo uSteve Kadlec, umseki kunye nenqununu yeKadlec Structure and Design eChicago.
Njengomphumo wobuchwephesha obunengqiqo ngaphakathi kwigumbi lokuphumla kunokufumana ngokukhawuleza iindleko zeebogs ezibalekayo zibaleke ziye kuthi ga kwi-17,000 yeedola- uKadlec ucebisa ngokugcina amaxabiso ezantsi kwenye indawo. Faka endaweni yegumbi letrone ngokucoca i-tile kunye ne-grout, utshintshe amakhethini okuhlamba ngeepaneli zeglasi kwaye ufumanise ifomathi enkulu okanye i-ceramic tile enkulu echaphazelekayo emhlabeni. Ukongeza cinga ngokufaka iitawuli ezingabizi kakhulu phantsi komgangatho, uthi. UGreg Coccaro, umseki-ntengiso we-Beam ethengisa iimpahla eBrooklyn, ukongeza ukucebisa ngepeyinti kunye nomsebenzi wobugcisa, ngakumbi ubushushu bokuhambisa iithowuni zobushushu ngaphakathi kweepore kunye nolusu. Incinci, ngokuthelekisa ukuhlengahlengisa okungabizi kakhulu kushiye imali engaphezulu kohlaziyo olusengqiqweni.
"I-Alexa, sebenzisa ibhafu": umyalelo owenziwe wafunyanwa ngu-U ngu-Moen Bathe 2-Outlet Digital Bathe Controller nge-beige okanye emnyama ($ 733.72- $ 734.74 ene-thermostatic digital bath valve, amazon.com). Iyacetyiswa ngumyili Kadlec, isixhobo sivumela ulawulo lokuhlamba kwilizwi, iselfowuni okanye isilawuli. Cwangcisa ixesha ekuhlambeni kwakho, qala kwaye unqumame ukulawula ukusetyenziswa kwamanzi, kunye nolawulo lobushushu. Iyafikeleleka ngakumbi ngeevenkile ezi-4.
Isensor Mirror Hello-Fi 8 ”Spherical evela kwi-Simplehuman inamaxesha amahlanu okunyusa isoftware yokwenza okanye ukucheba ($ 400, nordstrom.com). UTracy Morris, umyili wangaphakathi eMcLean, eVirginia, uthi: "Ndiyayithanda nje ukuba isebenze kwisicwangciso kwaye ifane nokukhanya okuqaqambileyo kwemini." "Kule modeli intsha, unokufaka isicelo sakho kunye nemisebenzi eyahlukeneyo egumbini eline-Alexa."
UCasey Hardin, wase-North Carolina osekwe kwi-Decorist, ucebisa ukuba kungabikho zandla (kwaye ngenxa yoko, zingabinazintsholongwane) iimpompo, ezifana ne-Zura Single Deal ne-Touch2O Vessel Rest room Faucet ($ 532.67, construct.com) yi Delta. Ngokukhawuleza nje ngenxa yeelos zeshishini, ezi mpompo zenza iindlela zazo kwiipropathi. Flip amanzi uvule ngesandla kunye nobunzima bokukhanya kwisinxibelelanisi okanye ujongane okanye ngokubeka iintende kufutshane nempompo. Isebenzisa amanzi angama-20% ngaphantsi kwamanzi kuneetephu zomgangatho.
Nangona uKirsten Gable, ikhitshi kunye nomyili webhabhu e-Maryland esekwe u-Anthony Wilder Design / Construct, eyalele indawo entsha yokuphumla kaToto iDrake Washlet + S500E yamanyathelo, uyazi ukuba ixabiso le- $ 2,035 linokungavumeleki. Izinketho zikaDrake ngasemva kunye nokuvalwa kokungena, isixhobo sokuhambisa deodorizer, ubushushu bamanzi obuguquguqukayo kunye nesihlalo eshushu, ukongeza kwi-flush esebenzayo; Nangona kunjalo, "iToto ibonelela ngefashoni elula ngokuncinci," utshilo, kunye neWashlet Electrical Bidet Seat ($ 254.93, homedepot.com). Indawo ekude ye-wi-fi ilungelelanisa uxinzelelo lwamanzi, ubushushu kunye nendawo. Isihlalo siyatshisa, kwaye isiciko sivaleka kamnandi. Isitulo sinokongeza isomisi somoya oshushu kunye nesixhobo somoya.
Izitikha zococeko, yonwabile: Isicoci esicociweyo sebrashi yamazinyo ngoku iyafikeleleka kwenzalo iibrashi zamazinyo phakathi kokusebenzisa. I-MAXOAK UV ye-Toothbrush Sanitizer Case ($ 29.99, maxoak.internet) "yeyona ndlela iluncedo kakhulu ekuncedeni ukuyigcina ingenantsholongwane kwaye ithatha kuphela imizuzu emithathu," utshilo ngaphakathi umyili uCoccaro kwi-imeyile.
Ngaphambili :: Izixhobo zeBath zenza ukubonwa kwesitayile next: Iphuli yokuntywila isinki uphawu lwendlu yangasese ephezulu
2022 / 01 / 23 114